Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “Xiaomi Mi Max” အကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ဖို့ ♫
♪ “Xiaomi Mi Max” အကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ဖို့ ♫
တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာအွန်လိုင်းရောင်းချမှုအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့Xiaomiဟာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေစမတ်ဖုန်းတွေ ရောင်းချခြင်းနှင့်အတူယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာသုံးစွဲသူပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိ နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုMi Max ရောင်းချပွဲကြီးမှာတော့3GB RAM 32GB ရွှေရောင်နဲ့ဖုန်းကိုကြိုတင်ဝယ်ယူမှုစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးမှာ ၂၆၅၀၀၀ကျပ်တိတိဖြစ်ကာပထမဆုံးဝယ်ယူသူ၅၀၀ဦးကိုပွဲတက်ရောက်ခွင့် လက်မှတ်နဲ့Mi Max တီရှပ်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှPre Order မှာယူချင်သူတွေအနေနဲ့Mi Home များမှာ စရံငွေ၁၀၀၀၀၀ကျပ် ပေးသွင်းပြီးစတင်မှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စတင်ဝင်ရောက်လာတော့မယ့်Mi Max စမတ်ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင် . . .
Mi Note Pro ထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့၆.၄၄လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Mi Max ကတော့Xiaomiရဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှစမတ်ဖုန်းများထဲ တွင်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။Mi Max ရဲ့အရောင်ပုံစံ ကတော့iPhone 6s Plus နှင့်ဆင်တူပြီးနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရွှေရောင်နဲ့ အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်အဖြူရောင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်Display Panel ကိုCorning Gorilla Glass4နှင့်ကာကွယ်ပေး ထားပြီး မျက်နှာပြင်အတွက်ခြစ်မိပွန်းပဲ့မှာတွေကိုပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အနောက်ဘက်တွင်တော့Redmi Note3တွင်ပါဝင်ခဲ့သလိုFinger Print Sensor ကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက် အပေါ်ဘောင်တွင်တော့3.5mm audio jack နှင့်remote အသုံးပြုနိုင်ရန်IR sensor နှင့်noise cancellation micတို့ပါဝင်တယ်။ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ညာ ဘက်ခြမ်းတွင် အသံအတိုး/အကျယ် ပြုလုပ်နိုင်သောခလုတ်နှင့်Power အဖွင့်/ အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်သောခလုတ်တို့ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဘယ်ဘက် ခြမ်းတွင်တော့ဆင်းကတ်ထည့်သွင်းစရာလေးကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးဆင်းကတ် ၂ကတ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဆင်းကတ်၁သည်Micro Simဖြစ်ပြီးဆင်းကတ်2ကို SD Card သော်လည်းကောင်းNano Simသော်လည်းကောင်းတပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ရှေ့ဘက်ဘောင်ရဲ့အောက်ဘက်တွင်တော့Micro USB ပေါက်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်၏ရှေ့ဘက်တွင်Selfieရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက်5MP ကင်မရာနှင့်နောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တော့Figure Sensor နှင့်16MP ကင်မရာတို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာအပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်Mi Max မှာတော့Redmi Note3Pro မှာပါဝင်တဲ့16MP Camera ကိုအသုံးပြုထားပြီးပုံထွက်ကောင်းမွန်စွာရိုက်ကူး နိုင်မှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာကြည်လင် တောက်ပတဲ့ပုံထွက်နေသကဲ့သို့အလင်းရောင်အားနည်းနေတဲ့ညနေခင်းလို အချိန်မျိုးမှာတောင်မှကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တွေဖမ်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။16MP ကင်မရာမှာတော့အရည်အသွေး မြင့်high definition sensor ကိုတပ်ဆင် ထားပြီး၊DSLR Camera တွေမှာပါဝင်တဲ့PDAF (Phase Detection AutoFocus) လည်းပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့Fingerprint Scanner ကိုအသုံးပြု၍လည်းရိုက်ကူးနိုင်စေ မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Battery Life (ဘက်ထရီသက်တမ်း) ကတော့Mi Max ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တွေထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့4850mAh lithium-ion battery ပါဝင်လာမှုကတော့အတော်လေးထူးခြားကောင်းမွန်ပါ တယ်။Screen မျက်နှာပြင်ကြီးမားလို့ဘက်ထရီကြာရှည်မခံမှာစိတ်ပူစရာမလို ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့Qualcomm ရဲ့Quick Charging 3.0 နည်းပညာလည်း ပါဝင်လာတဲ့အတွက်အချိန်၃၆မိနစ်အတွင်း၈၀% ခန့်ပြန်လည်အားသွင်းယူနိုင် မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအနေဖြင့်4G ကွန်ရက်အသုံးပြုနိုင်မှုပါဝင်ပြီးDual, LTE, Dual Standby ဖြစ်တဲ့အတွက်မည်သည့်Sim Slot မှ4G Data အသုံးပြုမည် ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။Sim 1 တွင်4G အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း Sim2အားGSM ကွန်ရက်သာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးမဲ့ကွန်ရက် WiFiချိတ်ဆက်မှုအနေဖြင့်Wi-Fi a/b/g/n/ac စတဲ့Standard Wifiများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးWi-Fi Direct ချိတ်ဆက်မှုလည်း ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။Mi Max မှာပါဝင်လာတဲ့Speaker ဟာ ဆိုရင်ဖြင့်အတော်လေးကိုထူးခြားကောင်းမွန်ပါတယ်။Mi5 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် တောင်မှအနည်းငယ်အသာစီးရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Mi Max မှာတော့Video Format တွေဖြစ်တဲ့MKV , MP4, MP4V, AVI, XVID နှင့်အခြားစတဲ့Format တော်တော်များများကိုSupport လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mi Max မှာMi5 ကဲ့သို့ပင်Full HD Display နှင့်၆.၄၄လက်မရှိIPS Display တို့ကိုတပ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုတော့ 2.5D ကွေးညွတ်ထားသောမှန်ပြားနှင့်Aluminium unibodyတို့ကိုတပ်ဆင် ထားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။Mi Max မှာတော့Mi Note Pro မှာပါဝင် ခဲ့တဲ့QHD (2K) Display ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ထပ်အချက် တစ်ခုကတော့display ကောင်းဖို့ထက်ဘက်ထရီကြာရှည်ခံစေဖို့ကို ရည်ရွယ် တယ်လို့လည်းယူဆရပါတယ်။Mi Note Pro ကိုMi5နှင့်တူတူယှဉ်ပြီးရုပ်ရှင် ကြည့်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ပြုလုပ်ကြည့်သည့်အခါတွင်သတိပြုမိသည့် အချက်ကတော့ပိုမိုကြီးမားတဲ့Display ဟာမြင်ကွင်းကျယ်ခံစားမှုရသ ကိုပိုရ တာပါ။Body Dimensions အရဆိုလျှင်173.1 ×88.3× 7.5mm (6.81×3.48×0.30in) ရှိတဲ့အတွက်ဖုန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အထူဆုံးနေရာမှာ တောင်တစ်လက်မရဲ့၁၀ပုံ/၃ပုံသာအထူရှိပါတယ်။အလေးချိန်203 g (7.16 0z) သာရှိသည့်အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလွယ်ကူစေမှာပါ။
<Processor and RAM>
Mi5ထွက်ပြီးလပိုင်းအနည်းငယ်မျှသာခြားပြီးနောက်Mi Max ဟာထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိရှိပြီးသားMi Note ထက်ပိုပြီးတော့ Screen ကြီးကြီးနှင့်ဖုန်းကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်အဆင်ပြေနိုင်စေမှာပါ။Mi Max မှာအသုံးပြုထားတဲ့Chipset ဖြစ်တဲ့Snapdragon 650 ဆိုတာကတော့ လက်ရှိလူကြိုက်များရေပန်းစားနေတဲ့Redmi Note3မှာအသုံးပြုထားတဲ့ Chipset ပါ။ဒီလိုProcessor ကိုGraphic processor ဖြစ်တဲ့Adreno 510, LPDDR3 RAM 3GB နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့ Graphic နှင့်Multitasking မှာပါအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။သိုလှောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့Mi Max မှာတော့32GB ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြလိုက်တဲ့စမတ်ဖုန်း၂မျိုးလုံးမှာHTC ကတော့ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါ တယ်။Mi Max ကတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာတချို့ဆိုင်တွေ၌ရောင်းချနေပြီး Mi Home ဆိုင်တွေကတော့တင်ကြိုမှာယူမှုသာလက်ခံပါသေးတယ်။စမတ်ဖုန်း ၂မျိုးဟာမတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီးသုံးစွဲသူတွေဟာလည်းလုံးဝကြိုက်နှစ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။တကယ်လို့များဒီဖုန်း၂လုံးကို ယှဉ်ပြိုင်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုကွာဟချက်တွေ မြင်တွေ့ရနိုင်မလဲဆိုတာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။Desire 726G ဟာအရင်ဦးဆုံးဈေးကွက်ထဲကို ၀င်ရောက် လာတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်နဲ့အတူDolby audio ဆိုတဲ့ မက်လောက်စရာHardware လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ကဲMi Max နဲ့Desire 728G ဘာတွေကွာဟနေသလဲ . . .
<Xiaomi MI MAX>
OS - Android OS, v6.0 (Marshmallow)
SCREEN - 6.44 inches IPS LCD
PROTECT - Gorilla Glass 4
CAMERA - 16MP (2160p HD)
INTERNAL - 32/64 GB,3GB RAM
BATTERY - Li-Ion 4850mAh
<Screen and OS>
Mi Max ဟာ6.44" မျက်နှာပြင်နဲ့အတူ342ppi ပုံရိပ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းနဲ့ ထွက်ရှိ လာပါတယ်။HD IPS+LCD မျက်နှာပြင်ဟာ မြင်ကွင်းတွေကို အထင်ရှားဆုံး ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိပြီး ခြစ်ရာစင်းရာတွေကာကွယ်နိုင်စွမ်းအတွက်Gorilla Glass ကိုသုံးစွဲထားပါတယ်။မျက်နှာပြင်ဟာHD အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် 1080×1920 resolution ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။OSကိုတော့Android 6.0 ကို သုံးစွဲထားပြီးMIUI7နဲ့လုံးဝအသားကျစေမှာပါ။
16MP Camera ကိုပဲသုံးစွဲထားပြီး13MP စွမ်းဆောင်ချက်သာရတဲ့728G ထက်စာရင်တော့အရည်အသွေးပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမယ့်Video ရိုက်ကူး မယ်ဆိုရင်တော့2160p HD အရည်အသွေးကိုအပြည့်အ၀ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယကင်မရာငယ်ဟာ5.0MP ဖြစ်တာကြောင့်Facetime ပြောဆိုမှုတွေကို ကြည်လင်စွာရရှိနိုင်မယ့်HDR, face detection လိုလုပ်ဆောင်ချက်မျိုးတွေ သုံးစွဲနိုင်မယ်။
<Hardware & Browser>
Androidရဲ့နောက်ဆုံးထွက်OSနဲ့မောင်းနှင်သုံးစွဲနိုင်စေဖို့အတွက်1.4GHz , Quad-core processor ကိုAdreno 510 GPU နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာHD ဂိမ်းအမြင့်တွေကို ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအခြားဆော့ဝဲတွေသုံးစွဲချိန်နဲ့ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုချိန်တွေမှာဘက်ထရီစွမ်းအင် ချွေတာနိုင်စွမ်းကိုသွားရောက် အထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မယ်။အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်စေဖို့အတွက်HTML5အထောက်အပံ့ရှိပါတယ်။
<Battery & Storage>
4850mAh ဘက်ထရီကဗီဒီယိုသီးသန့်ကြည့်ရှုဖို့ဆိုရင်၁၅နာရီခံနိုင်ရည် စွမ်းရှိပြီးHD Game တွေသီးသန့်ဆော့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့၆နာရီနီးပါး ခံနိုင်ရည်စွမ်း ရှိပါလိမ့်မယ်။အချက်အလက်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းအတွက်32GB ဖြစ်ပြီ3းGB RAM ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။
<HTC Desire 728G>
OS - Android OS, v5.1.1 (Lollipop)
SCREEN - 5.5 inches Super LCD2
CPU - Octa-core 1.3 GHz
CAMERA - 13 MP, 4128 x 3096 pixels
INTERNAL - 16 GB, 1.5 GB RAM storage
BATTERY - Li-Po 2800 mAh
Desire 728G က5.5"မျက်နှာပြင်နဲ့ပဲဖြစ်ပြီးppiကတော့267 ဖြစ်တာကြောင့် Max ထက်စာရင်မျက်နှာပြင်ကျဉ်းပါတယ်။Super LCD2 မျက်နှာပြင်ဟာ1280 x 720HD အရည်အသွေးပုံရိပ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းကိုအကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးပါလိမ့်မယ်။ကြည်လင်တောက်ပမှုမှာတော့ppi မြင့်တဲ့Max လောက်ပုံရိပ် တွေ ကြည်လင်ပြတ်သားနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။Android 5.1 နဲ့တန်ဆာဆင်ထား တဲ့HTC sense UI ကိုသုံးနိုင်မှာပါ။သီချင်းပိုင်းအတွက်Dolby audioနဲ့ပေါင်းစပ် ထားပါတယ်။
Desireရဲ့ကင်မရာအရည်အသွေးဟာMax နဲ့ယှဉ်ချိန်မှာတော့အတော်လေး အရည်အသွေးနိမ့်ပါတယ်။13MP ဟာထိပ်တန်းအရည်အသွေးရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတွေအတွက်1080p@30fps နှုန်းနဲ့ အရည်အသွေးအပြည့်ရရှိမည်။ဒုတိယကင်မရာငယ်ဟာ5MP ပဲဖြစ်ပြီး 1080p@30fps အရည်အသွေးရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမယ်။f/2.2, 28mm စွမ်းဆောင်ချက်ရပါလိမ့်မယ်။
5.1(lol) ကိုအပြည့်အ၀အသုံးချနိုင်ဖို့1.3 GHz , Octa-core Processor နဲ့အတူLG G2 နဲ့သိပ်မကွာဟတဲ့Hardware အပြင်အဆင်တွေပါဝင်လာ ပါတယ်။ဒါကြောင့်HD Movie တွေဂိမ်းတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Appတွေသုံးစွဲတဲ့အချိန်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်စမ်းသပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်အထောက်အပံ့အတွက်HTML5ပါဝင်ပြီးGoogle ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု တွေကိုရရှိသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
2800mAh ဘက်ထရီဟာစွမ်းအင်ချွေတာမှုကိုပိုမိုထောက်ပံ့နိုင်ပြီး 3Gကွန်ရက် မှာ အချိန်ပြည့်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်၁၁နာရီနီးပါးခံနိုင်စွမ်းရှိပါမယ်။16GB အချက် အလက်သိမ်းဆည်းနိုင်မှုရှိကာ1.5GB RAMပါဝင်ပါတယ်။ SDကတ် ကနေ တော့ထပ်မံတိုးမြှင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။